Q: Ungaita sei kuti pave Quality Good takagamuchira?
A: Chekutanga, Tine QC dhipatimendi kuti Quality kudzora kubva Raw zvinhu kusvikira apedza zvigadzirwa. Chechipiri, Tichaita Inpsection munguva kugadzirwa uye pashure Production. Chechitatu, zvigadzirwa edu ose vachaedzwa vasati kurongedza ndichivatuma panze. Isu achatuma Inspection kana yokuedzwa vhidhiyo kana mutengi asina kuuya kuongorora personly.
Q: Ko warrenty?
A: All Products edu kuva 1 gore warrenty pamwe Life-Long Maintenance basa. Tichafara kukupa rusununguko rwokugadzira rutsigiro.
Q: Ko iwe kupa chero rubatsiro panyaya Products Operation?
A: michina All mukati zvigadzirwa sumo, emirayiridzo Chirungu riri kuva zvose nokushanda mazano uye Maintenance vaitaura panguva kushandisa. Zvichakadai, Tingazvibvunzawo kukutsigira nevamwe nzira, sezvinoita kukupa Video, Show uye kukudzidzisa pamunenge muri fekitari yedu kana mainjiniya Yedu fekitari yako kana zvakumbirwa.
Q: Ndingaita kuwana Spare Parts?
A: Tichafara komberedza vamwe anokurumidza kusakara nhengo pamwe kuitira yako, uyewo vamwe zvinodiwa maturusi kuti muchina uyu riri akasununguka zvichabviswa kutuma pamwe wtih Order yako mudziyo bhokisi. Tine zvose kupembedza zvikamu richiswedera mukati Manual vane mazita. Unogona chete kutiudza kwako kupembedza nhengo No. In ramangwana. Tinogona kukutsigira yose nzira. Uyezve, nokuti beveling muchina vematombo bevel zvishandiso uye inoisa, Zviri kworudzii comsumable kuti michina. Zvaiwanzoita kukumbira kugara pezvitsiga chinogona easyly kuwana pamusika womunzvimbo munyika yose.
Q: Chii Your Delivery Date?
A: Zvinotora mazuva 5-15 nguva dzose yokutevedzera. Uye mazuva 25-60 nokuda customized muchina.
Q: Ndingaita kuwana mamwe mashoko pamusoro muchina uyu kana silimars?
A: Pls nyora pasi mibvunzo yako uye zvinodiwa kuti pazasi muvhunzo bhokisi. Tichafara kuongorora uye kupindura iwe Email kana Phone muna 8 Hours.